Kareena Kapoor oo lagu ceebeestay inay qof Muslim ah guursatay iyo Swara Bhaskar oo difaacday! – Filimside.net
Kareena Kapoor oo lagu ceebeestay inay qof Muslim ah guursatay iyo Swara Bhaskar oo difaacday!
April 15, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: April 15, 2018
Sedexda atirisho ee filimka The Veere Di Wedding isla jilayaan of Kareena Kapoor Khan, Sonam Kapoor iyo Swara Bhaskar ayaa isku imaadeen xili ay u doodaan xaqa ka maqan gabbar yar oo 8-jir ah taasi oo Delhi madar ku yaalo lagu kufsaday.
Kareena, Sonam iyo Swara waxay soo gaarteen warqad ay ku qoran tahay “Waxaan ahay Hindi, waan ceebeesanahay, waa in cadaalad helaa cunugeena, 8-jirka ah ee kusfi wadareedka loo geestay, la dilay taasi Mandarka Devi-Sathan dhibaatada loo geestay”
Madaama Kareena Kapoor Khan aysan baraha bulshada adeegsanin kuwo Hinduu xag jir ah ayaa atirishadaan bar tilmaameed ka dhigteen sawirkeeda ay atirishada Swara Bhaskar soo galisay Twitter-ka.
Nin magaciisa Hardhwardan kusoo qortay Twitter-ka ayaa Kareena weerar qoraal ah kusoo qaaday wuxuuna yiri “Adiga is ceebso madaama dhab ahaantii adigoo Hinduu ah guursatay nin Muslim ah, kadibna aad cunug u dhashay sidoo kalena u bixisay wiilkaaga magac Muslim, adigoo og in Islaam-ka dadka argagax galiyaan!!”
Atirisada Swara Bashkar ayaa aad u carootay waxayna u jawaab celisay ninkii Kareena weerar kusoo qaaday madaama Kareena baraha bulshada aysan adeegsanin.
Swara waxay tiri “Adiga is ceebso jiritaanka ceeb hakaa raacdo! Wuxuu Alle ku siiyay maxkax aad ka buuxisay naceeb sidoo kalena ku siiyay af balse aad ku dooratay inaad xumaan ku faafisid!”
“Ceeb ayaa ku tahay Hindiya iyo dadka Hinduuga ah, dadka Hinduuga ah waad niyad jebisay madaama aad dadka kala saareysid, tani ma dhaxalka dowlada Hindiya madaama ay naga qaban weesan tahay kuwa dambiilayaasha ah ee caruurteena xaqooda galayaan kadibna dadka kala saarayaan!!”
Waxaa Aqrisay 2,460
waan arkay twiterk waa nin nacayb muslimnimo kabuuxo eey dheh muxuu ka qaadi karaaba